မိခင်နို့နဲ့နို့မှုန့်က ဒီလိုကွာခြားပါတယ် - Hello Sayarwon
Dr. Htet Htet Zaw Win မှ ရေးသားသည်။ 17/02/2022 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
မိခင်တိုင်းအတွက် ရင်သွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကြီးမားဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတဲ့အချိန်တစ်ချိန်က ကလေးကို မိခင်နို့ပဲတိုက်မှာလား ဒါမှမဟုတ် ကလေးကို နို့ဘူးတိုက်မှာလားဆိုတာပါ။ မိခင်တိုင်းက ကိုယ့်ရင်သွေးကို ကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ကလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းစေချင်ကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ မေမေတွေအတွက်ကတော့ ရင်သွေးလေးကို တစ်ချိန်လုံး မိခင်နို့ပဲတိုက်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒီတော့ နို့ဘူးအကူအညီခေါ်ရပြီပေါ့။ မိမိရင်သွေးကို နို့ဘူးတိုက်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့မေမေတို့ရေ ဘာလုပ်မယ်လို့ မဆုံးဖြတ်ခင်မှာ ဒီဆောင်းပါးလေးအရင်ဖတ်ကြည့်နော်။
ကလေးအတွက် ခန္ဓာကိုယ်ကနေ အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မယ့် ပုံစံတစ်ရပ်နဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ အာဟာရရင်းမြစ်တစ်ခုပေါ့။ ကလေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေပါဝင်နေတဲ့ အစားအစာတစ်ရပ်ပါ။ မိခင်နို့ထဲမှာ ကလေးကိုပြင်ပကရောဂါပိုးတွေ ကူးစက်ဝင်ရောက်မှုကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ ပဋိပစ္စည်းတွေ အများအပြားပါဝင်နေတာပါ။ ကမ္ဘာဦးစကတည်းက တိုက်ကျွေးလာတဲ သံသယ ဖြစ်ဖွယ်မရှိတဲ့ ကလေးတွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံးအာဟာရပါ။
မိခင်နို့တိုက်ကျွေးမှုက ကလေးငယ်မှာ –
ဒါတင်မကပါဘူး။ မိခင်နို့ပြည့်ဝစွာသောက်သုံးခွင့်ရတဲ့ ကလေးတွေက ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးပိုကောင်းကြသလို အသက်အရွယ်ရလာတဲ့အခါမှာလည်း အဝလွန်တာ၊ အမျိုးအစား -၁ ဆီးချို၊ အမျိုးအစား -၂ ဆီးချိုရောဂါ၊ သွေးတိုး ၊နှလုံးရောဂါ၊ သွေးတွင်းကိုလက်စထရောများတာ၊ ကင်ဆာလိုမျိုးရောဂါတွေခံစားရနိုင်ခြေနည်းပါတယ်။
မိခင်အနေနဲ့လည်း ကလေးကိုနို့ချိုတိုက်ကျွေးတာကြောင့် ရင်သားကင်ဆာ၊ သားအိမ်ကင်ဆာ၊ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါတွေ၊ အမျိုးအစား -၂ ဆီးချိုရောဂါ၊ သွေးတိုး၊ အရိုးပွရောဂါနဲ့ ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက် စိတ်ကျရောဂါခံစားရမှုတွေကနေကင်းဝေးမှာပါ။ ဒီတော့မိခင်နို့တိုက်ကျွေးတာက win-win သီအိုရီပါ။
နို့မှုန့်တွေက မကောင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ နို့မှုန့်တွေက ကလေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေပြည့်ဝအောင်ဖြည့်စွက်ထုတ်လုပ်ထားပေမယ့် မိခင်နို့မှာပါတဲ့ ပဋိပစ္စည်းတွေပါဝင်တာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် နို့မှုန့်တွေရဲ့ အားသာချက်က ကလေးဖျားနာတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့အတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမယ့် ဓာတ်တွေထည့်သွင်းထုတ်လုပ်ထားတာပါ။ တချို့နို့မှုန့်တွေထဲမှာ ဗီတာမင် နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေမြင့်မားစွာပါဝင်နေတာကြောင့် အစာကြေခဲတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ သတိထားရမယ့်အချက်ပေါ့။ ဒါကြောင့် ကလေးကိုနို့မှုန့်တိုက်တဲ့အခါ အတိုင်းအချင့်သေချာအောင်တိုက်ပေးသင့်ပါတယ်။ နို့မှုန့်အများကြီးသောက်တဲ့အခါ ကလေးငယ်မှာ လေပွတာ၊ ဝမ်းချုပ်တာ၊ အစာမကြေတာမျိုးတွေခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နို့ဘူးတိုက်မယ်ဆိုရင် သေချာ ရွေးချယ်ပါ။ နို့ဘူးတိုက်တဲ့အခါနောက်ထပ်သတိထားရမယ့် အချက်တစ်ချက်က နို့ဘူးတွေကိုသေချာဆေးကြောသန့်စင်ဖို့ပါ။
လူကြားထဲမှာလည်း ကလေးကို အဆင်ပြေပြေနို့တိုက်ကျွေးလို့ရတယ်။
ကလေးဆာတဲ့အချိန်တိုင်း မိခင်အနားမှာမရှိရင်တောင် ကလေးကိုတိုက်ကျွေးပေးလို့ရတယ်။
ညဘက်အချိန်တွေမှာ ဖခင်ကို အကူအညီတောင်းပြီး ကလေးကိုတိုက်ကျွေးစေလို့ရတယ်။
အစားမှားတာကြောင့် ကလေးထိခိုက်မှာကို စိုးရိမ်ဖို့မလိုဘူး။
အလုပ်သွားနေချိန်မှာ ကလေးနို့မဝတာမျိုးဖြစ်မှာ စိုးရိမ်စရာမလိုဘူး။
အာဟာရနဲ့အကျိုးကျေးဇူးကွာခြားချက်တွေရှိနေပေမယ့် နှစ်ခုစလုံးက ကလေးတွေအတွက် မကောင်းတာမရှိပါဘူး။ မိခင်နို့တိုက်ကျွေးမယ်ဆိုရင် ကလေးနဲ့မတည့်တာမျိုးတွေမစားမိဖို့ သတိထားရမှာဖြစ်သလို နို့မှုန့်တိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း ကလေးရဲ့ အသက်အရွယ်နဲ့လိုက်တဲ့နို့မှုန့်ဖြစ်စေဖို့ သေချာသတိထားရွေးချယ်ရမှာပါ။ အရေးအကြီးဆုံးအချက်က ကလေးကျန်းမာဖွံ့ဖြိုးဖို့ပါ။ ဒီတော့ မိခင်နို့တိုက်မလား၊ နို့မှုန့်တိုက်မလား၊ နှစ်မျိုးစလုံးကို အချိုးညီညီတိုက်မလားဆိုတာကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျဆုံးဖြတ်လိုက်ပါမေမေတို့ရေ…..
The difference between breast milk and formulahttps://www.themothersprogram.ca/infant-care/formula-feeding/the-difference-between-breast-milk-and-formula Accessed Date 17 October 2018
Breast Feeding vs. Formula Feedinghttps://kidshealth.org/en/parents/breast-bottle-feeding.html Accessed Date 17 October 2018
Breastfeeding vs. Formula Feedinghttps://www.webmd.com/baby/breastfeeding-vs-formula-feeding#2 Accessed Date 17 October 2018
ကလေးများအတွက် အကျိုးပြု ဘက်တီးရီးယားများနှင့် ဘက်တီးရီးယားအစာများ
ကလေးမှာလိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေ မပြည့်ဝဘူးဆိုတာကိုသိရှိနိုင်မယ့် လက္ခဏာရပ်များ